चुरे संक्षरणको नाउँमा खोलामा पोखरी, पैसाको सत्यानास – Mero Pradesh TV
Mero Pradesh TV DeskMay 29, 2020
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले धनुषाको बाहुनमारास्थित रातु खोला किनारमा निर्माण गरेको पोखरी उपयुक्त ठाउँमा नभएको भन्दै स्थानीय बासीले बिरोध जनाएका छन् ।
बाहुनमारा । धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नं. ११ मा पर्दछ । सो ठाउँ भएर बग्ने रातु खोलाको बगर नजिकै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा एक महिनाअघि ‘भूमिगत जल उपयोग’ शिर्षकमा पोखरी निर्माण गरेको छ । पोखरी उपयुक्त ठाउँमा नभएको र आर्थिक हिनामिनाको आशंकामा स्थानीय गाउँलेहरुले बिरोध जनाएका हुन् ।
स्थानीय बासिन्दा प्रेम कार्कीले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिद्वारा निर्माण गरिएको पोखरी रातु खोला र चितुवा खोल्सीको उच्च जोखिममा रहेको बताए । ति खोलामा आउने एउटै बाढीले पोखरी कटान गरेर लान्छ । बगरमा पोखरी टिक्नै सक्दैन् उनले भने ।
दुइ खोलाको बीचमा पोखरी निर्माण गरेको छ । ‘सरकारी पैसाको सत्यानास पार्ने उद्देश्यमा मात्र देखियो’, स्थानीय बासी कार्कीले आरोप लगाए । उनले गाउँलेका लागि त्यो पोखरी प्रयोगमा नआउने बताउँदै चुरे संरक्षणको नाम गलत प्रयोग गरिएको जनाए । पोखरी निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा गठन गरिएको समिति पनि भेला नगरी आफ्ना नजिकका मान्छे राखरे कार्य गरेको आरोप कार्कीको छ ।
मिनपा वडा नं. ११ तुलसीका वडा अध्यक्ष बेद बहादुर कार्कीले पनि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समितिले निर्माण गरेको पोखरी उपयुक्त ठाउँमा नभएको जिकिर गरे । उनले पनि अनावश्यक ठाउँमा पोखरी निर्माण गरेको आरोप लगाए । ‘अहिलेको ठाउँदेखि अलि मास्तिर खन्देको भए सिंचाइलगायतको काममा पानीको प्रयोग हुन्थ्यो’,‘वडा अध्यक्ष कार्कीले भने ।’
यता चुरे संरक्षण समितिका कार्यालय प्रमुख शिव पोखरलले पोखरी निर्माण गरिएको स्थान नजिकै आर्यघाट भएको र दाहसंस्कारमा आउने मानिसलाई चोखिन सुविधा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सो ठाउँमा पोखरी निर्माण गरिएको बताए । पोखरी निर्माणका लागि त्यहाँ गठन गरिएको समितिको सल्लाहअनुसार नै सो ठाउँमा पोखरी खनिएको छ । पोखरी निर्माण र संरक्षण व्यवस्थापनका लागि झण्डै १३ लाख बजेट छुट्टयाइएको छ । जसमध्ये नौ लाख पोखरी निर्माणमा खर्च भएको र बाँकी रहेको रकमले संरक्षण कार्यमा खर्चिने प्रमुख पोखरेलले जनाए ।
सरस्वतीको मुर्ति बनाउन भ्याइ नभ्याइ
महोत्तरीमा खानेपानीको झनै अभाव, चुरे विनाशको असर , सुक्न थाले पानीको मुहान